Te Onepoto lodge Sumner, breakfast, spa, L8 chkout - I-Airbnb
Elona khefu liphumlileyo kwisixeko saseCHRISTCHURCH esine-spa. Ufike kwangethuba uphume kade kulungile. Yonwabela isidlo sakusasa esincomekayo esijonge iTaylors Mistake beach kwindawo yabatyebileyo yaseSumner le ndlu intle ye80 sq yemitha yiyo yonke into oyifunayo. Lala ngesandi sokusefa apha ngezantsi kwaye uvuke kubuhle bokuphuma kwelanga kunye nesandi seentaka zomthonyama kwityholo elidumileyo laseNew Zealand. Ngokuhamba ngokuthe ngqo ukufikelela elunxwemeni ukusuka kweli khaya elihle lokwakha. Isitulo sefestile esiziimitha ezine sijonge ngaphaya kwebhayi
Ukufikelela ngokulula kwinqwelomoya enye emfutshane yezinyuko ukusuka kwindawo yokupaka ngaphandle kwendlela ukuya kwigumbi lakho elikhulu. Ukungena okwahluke ngokupheleleyo kubabuki zindwendwe bakho kunye nenqanaba lesibhedlele elingenachaphaza elicocekileyo phakathi kweendwendwe oku kukhuselekile njengoko kukuhle. Ubukhulu bemitha ye-40sq yelanga egcwele indawo yokuhlala enemibono ebanzi yolunye lolwandle oluthandwayo lwaseNew Zealand. Yandiswa ukuya kwi-20 sq m enelanga ejonge emantla ejonge kumgangatho ojongene netyholo elihlaziyayo kunye nolwandle. Amagumbi okulala amabini kunye negumbi lokuhlambela elikhulu ligqibezela indawo. Yonwabela icandelo le-5000sqm elibaleka ngqo ezantsi elunxwemeni, kunye nebhonasi eyongeziweyo ye-spa egcinwe kakuhle yabantu aba-4. Akukho nto ibambekayo malunga neli khaya lihle, libanzi njengeembono, linegumbi elaneleyo lazo zonke iindwendwe. Nceda uqaphele ukuba sihlala endulini kwaye kukho indawo eyaneleyo kwiqonga lokupaka isithuthi sondwendwe olunye. Kusenokuba ngumceli mngeni kwiimoto zemidlalo ezinokususwa kwendlela ephantsi ngenxa yokuthambekela kokuqhuba. Kukho iindawo zokupaka iimoto ezongezelelweyo ezichokoziweyo phezulu nasezantsi kwendlela kunye neendawo zokupaka iimoto ezinkulu emazantsi enduli elunxwemeni.
4.95 · Izimvo eziyi-132
Ulwandle lwaseTaylors iMistake lolona lwandle luthandwayo yiChristchurch. Okuvalelwe phakathi kweendawo eziphambili kwaye kukho i-Baches yaseNew Zealand iTe Onepoto (unxweme oluncinci) intle ngokungenakuphikiswa. Iindlela ezintle ezigcinwe kakuhle eziya kwiintloko zikaGodley kunye neBoulder bay zibonelela ngeendawo eziphefumlayo kunye nethuba lokuhlola imbali yaseNew Zealand. Yaziwa kakhulu ngayo iindledlana zeebhayisekile zeentaba kunye neparagliding nayo le yeyona ndawo ifanelekileyo ukonwabela ngaphandle okukhulu.
Sihlala kwipropathi kwaye siyavuya kakhulu ukukunceda. Nangona kunjalo, ngokufikelela kwakho, uqinisekiswa ukuba ubucala bakho.
Silusapho oluzolileyo noluhloniphayo. Sicela nje ukuba ingxolo igcinwe kancinci ukusuka ngentsimbi yeshumi ebusuku nanjengoko sinabantwana abancinci.
Silusapho oluzolileyo noluhloniphayo. Sic…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$317